Ukunikezwa Nokufuna Izimbuzi eNingizimu Afrika
Isidingo samasiko esendaweni sokusetshenziswa kwezimbuzi eSouth Africa okwamanje siyashayela (futhi sidlula) ukuhlinzeka kwezimbuzi eziphilayo. Izimbuzi zenyama zidayiswa ikakhulukazi emkhakheni ongakahleleki, e-Eastern Cape naseKwaZulu-Natali, okushayela imboni yembuzi. Imakethe ephilayo engakahleleki ikhokhela amanani aphakeme kunama-slash esemthethweni kanye nembuzi anganikela (isb. U-R1 200 no-R700 ngobukhulu obufanayo/isilwane seminyaka - Nov 2018). Imakethe yezimbuzi ezingavumelekile eNingizimu Afrika iningi lihlinzekwa yizimpongo zendabuko (eziphilayo) kanye nezinye izimbuzi ze-Angora ezidala (zonyaka).
Ukutholakala Kwezebhizinisi lezenyama yembuzi
Ucwaningo lwe-South African Meat Industry Company (i-SAMIC) zibonise ukuthi izimbuzi ezihlatshwe emkhakheni wezebhizinisi ziyizimbuzi ezinkulu zeBoer kanye ne-Angora yezimbuzi ezenza cishe ngamaphesenti angu-0.55% wezimbuzi ezihlatshwe ezentengiselwano. Kodwa-ke, ezinye izibukeli zibeka inani lembuzi yokuhlaba ukuhweba ngama-5%.
Ukusuka ngo-2018, zonke izidumbu zezimbuzi ezihlatshwe ezindaweni zokuhweba kufanele zibekwe uphawu oluhlaza okwesibhakabhaka nokuluhlaza okwesibhakabhaka. Uphawu oluhlaza okwesibhakabhaka lusetshenziselwa kuphela izingane (izinyane lembuzi) ngenkathi uphawu lwe-orange lusetshenziselwa zonke izidumbu zezimbuzi, kungakhathaliseki ukuthi ziningi kangakanani. I-Boer Goat Breeders Association inomuzwa wokuthi lo mqulu omusha ozosiza uzosiza ekuthuthukiseni ukusetshenziswa kwezimbuzi zezinkomo eNingizimu Afrika.
Ngonyaka we-2018 iphrojekthi yaqaliswa ukuhlola ukumaketha nokuthengiswa kwezimpahla zemikhiqizo yase-Angora eqenjini lezitolo zokudayisa e-Eastern Cape. Le phrojekthi yayingenakulungiswa ngokwezomnotho ngenxa yokutholakala kwenkathi yeminyaka yezimbuzi ze-Angora. Lesi sikhathi sonyaka sibangela ukutholakala okungavumelani. Ngaphezu kwalokho, kubonakala sengathi abathengi babelokhu bekhetha imvu engaphezu kwezindleko ezibizayo (+ R10 - R20 / kg) noma i-mutton kunokwenyama yembuzi. Kodwa-ke, abanye abakhiqizi baye baphawula (ngo-November 2018) ukuthi abahloli bezinyama abazi njalo ukuthi bangahlukanisa kanjani izidumbu zezimbuzi.
Umkhiqizi wezimbuzi weWestern Cape Boer Pip Nieuwoudt uthi kukhona ukukhula ekudleni inyama yezimbuzi ngenxa yezinzuzo zezempilo zenyama, kodwa ngenxa yezimbuzi ezinhle zamanani ezithatha emkhakheni ongakahleleki kukhona okungahle kube khona ekudleni nakwezitolo.
Ukuthuthukisa iMakethe yenyama yezimbuzi
Ukuthuthukiswa okuqhubekayo kwemboni yokulima yezimbuzi kudingekile futhi inhlangano ye-Red meat Producer's (i-RPO), izinhlangano ezizalisayo kanye neminyango kahulumeni yezolimo zisesimeni esihle sokusiza ngalokhu. Lokho kwakungumqondo weqembu lezimbuzi lezinyama eziphethwe nguDkt Pieter Prinsloo.
Ezinye izindawo zemboni yokulima imbuzi efuna ukunakwa yikukhangisa kahle inyama yezimbuzi, imfundo yabathengi kanye nokucwaninga nokuthuthukiswa.
Abakhiqizi abaningi bakholelwa ukuthi inselele enkulu futhi empeleni, ebaluleke ekuthuthukiseni umkhakha wezinkomo wezimbuzi, kuthuthukiswa inqubomgomo kahulumeni.
Iqembu lenyama yembuzi yokudla
Iqembu lezinyama zokudla Ngo-2016, i-Red Meat Research & Development SA (RMRD-SA) yabiza iqembu elisebenzayo ukuze lisebenze ohlelweni lokuthuthukiswa kwembonini yezimbuzi. Iqembu elisebenzayo lalihlanganisa izinyama zezinkomo zokuzalanisa imbuzi, iminyango yesifundazwe yezolimo, i-SA Mohair Cluster, i-Informal Goat Industry Cluster, i-Agricultural Research Council (ARC) kanye neSouth African Meat Industry (Samic).
Phakathi nomhlangano ngoJuni 2018, leli qembu elisebenza ngaphansi kobuholi bukaDkt. Pieter Prinsloo lenze izincomo, ezibandakanya ngqo ukumaketha kwenyama yembuzi, ucwaningo olunzulu kanye nemfundo yabathengi. Isiqhema sabantu abathintekayo sathi umkhakha ongakahleleki ungumthombo oyinhloko wokuthola imali embonini yezimbuzi, kepha kusekhona amathuba okuthuthukisa izimakethe ezincane.